केपी ओली यो राष्ट्रको नायक हो, उहाँले देखाएको बाटोमा नै राष्ट्र हिँड्ने हो : सुमन प्याकुरेल (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
केपी ओली यो राष्ट्रको नायक हो, उहाँले देखाएको बाटोमा नै राष्ट्र हिँड्ने हो : सुमन प्याकुरेल (भिडिओसहित)
काठमाडौं, २४ भदौ । नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य सुमन प्याकुरेलले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो मर्यादाअनुसार भूमिका निर्वाह नगरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले आफ्नो पार्टीले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई विधिसम्मत् रुपमा कारबाही गर्दापनि सभामुखले पदमुक्त नगरेको भन्दै आक्रोश पोखे ।
हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अहिलेको सत्तापक्षीय गठबन्धनको कारण एमाले फुटेको दाबी गरे । उनले पार्टीभित्र हुने अन्तरविरोध स्वभाविक रहेको पनि सुनाए । उनले दल विभाजनको लागि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै भूमिका नखेलेको पनि दाबी गरे ।
उनले अध्यक्ष ओलीलाई यो देशकै सबैभन्दा ठूलो नेता र राष्ट्रकै नायकको संज्ञा दिए । उनले भने,‘केपी ओली यो देशकै सबैभन्दा ठूलो नेता हो । उहाँ राष्ट्रको नायक हो । उहाँले देखाएको बाटोमा नै राष्ट्र हिँड्ने हो ।’ उनले प्रचण्डको नेपाली राजनीतिमा के हैसियत छ र ? भन्दै कडा प्रश्नसमेत गरे ।
‘अब देशलाई निर्वाचनमा लिएर जानुको अर्को विकल्प छैन्’ : प्रदीप पौडेल (भिडिओसहित)
प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता प्रदीप पौडेलले सरकारको बारेमा अहिले नै मूल्यांकन
एमाले ५७ दिने संसद् अवरोधको रेकर्ड तोड्न खोज्दै छः माओवादी नेता
काठमाडौं, असोज १ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता चक्रपाणि खनालले नेकपा एमाले ५७ दिनको
मुलुकमा सरकारै छैन, सबथोक सेटिङमा चलिरहेको छः डा. दीक्षित
काठमाडौं, असोज १ । नागरिक समाजका नेता डा. सुन्दरमणि दीक्षितले मुलुकमा सरकारै नभएको टिप्पणी गरेका
राजनीति गतिरोधको एक मात्र निकास निर्वाचन होः कांग्रेस नेता पौडेल
काठमाडौं, असोज १ । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले राजनीतिक गतिरोध बढ्दै गएकाले एक